Tanànan’Ankodahoda: hadino tanteraka ara-bakiteny | NewsMada
Tanànan’Ankodahoda: hadino tanteraka ara-bakiteny
Par Taratra sur 16/03/2019
« Ankodahoda » : zary mandrabiraby izay teny izay, satria ireo toerana very any amin’ny faritra lavitra ka hadinon’ny be sy ny maro ny fisiany no dikan’io teny io. Ara-bakiteny izany ankehitriny ! Ny tiana ambara eto, Ankodahoda, fokontany iray ao amin’ny kaominina Andaingo, lalovan’ny lalam-pirenena faha-44 (RN.44), andehanan’ny fiara adim-pamantaranandro roa sy sasany mianavaratra, avy ao Moramanga ; lalovan’ny zotra fiaran-dalamby Moramanga – Lac Alaotra na MLA. Tsy misy fanamboarana ny lalana hatramin’izao, ary ny zotra fiaran-dalamby, karazany tantara sisa.
Tanàna mangingina fa misy zana-bohitra maromaro ny manodidina azy, ary misy tany malalaka dia malalaka sy alan-kininina noteren’ny Vazaha novolena tany aloha. Niaina ny ngidin’ny fanjanahantany ny mponina, satria toerana nanjakan’ny voanjo mpanjanaka Andaingo, Amboasary, sns tsy lavitra eo.
Afaka nalaim-panahy nihetsika nanohitra ireo mpanjanaka tamin’ny taona 1947, ny tao Ankodahoda noho ireo toe-javatra nasongadina ireo. Nefa nopotehin’ny mpanjanatany ireo tia tanindrazana, toy ny tamin’ny toeran-kafa rehetra, any Beparasy-Moramanga, nisy an-dRamenasanga.
Lamasinina kely ny nampiasaina tamin’izany, nentin’ny mpanjanatany nandraofana ireo tia tanindrazana notifirina tany andrefan’i Moramanga. Tsy hadinon’ny mponin’Ankodahoda mandraka androany ireo maherifony novonoin’ireo Vazaha ireo ka nananganany tsangambato. Eo amoron’ny RN44 ahitan’ny mpandalo izany, amin’ny sisiny atsinanan’ny lalana ny tsangambato kely iray mifefy rantsan-kazo misy soaratra hoe:”Tianay ny tanindrazanay !”. Asa raha mba misy manao jeriatrika eo rehefa 29 marsa ?
Ny mponina amin’io toerana io sy ny manodidina moa toa hadino tanteraka, mijaly amin’ny lafiny sosialy sy ny fihariana. Tsy vitsy amin’ireo olona ireo anefa no taranaka navelan’ireo tia tanindrazana natao sorona.